इन्टरनेट बिना नै चल्ने एउटा एप्लिकेशन, भारतमा सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीहरूले प्रयोग गरेको आशंका
एजेन्सी । भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयकको विरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनलाई निस्तेज बनाउनको लागि सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिए । तर त्यसले प्रदर्शनलाई निस्तेज बनाउन सकेन । यसको कारण एउटा मोबाइल एप्स रहेको आशंका गरिएको छ ।
आशंकाहरूका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले खबर आदनप्रदानका लागि फायरच्याट नामक एक एप्लिकेशनको प्रयोग गरिरहेका छन् जुन एप्लिकेशन बिना इन्टरनेट चल्ने गर्दछ । आशंकालाई बल पु¥याउने गरी विरोध प्रदर्शनहरू चल्दै गर्दा गुगल प्ले स्टोरमा फायर च्याट एप्स ट्रेण्डिङमा रहेको छ ।
गुगल प्ले स्टोरबाट हालसम्म १० लाख जनाले फायरच्याट डाउनलोड गरेका छन् । यो एप्सले बिना इन्टरनेट काम गर्दछ । यसले ब्लुटुथ र वाइफाइको साहारामा काम गर्न सक्ने बताइएको छ । फायरच्याट एप्सले मोबाइन फोनको नेटवर्क बिना पनि आसपासका फायरच्याट प्रयोगकर्तासँग कुराकानी गर्न सक्दछ ।
गत बिहीबारको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न पुगेपछि प्रशासनले दिल्ली र उत्तर प्रदेशको अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गराएका थिए । यस बाबजूद प्रदर्शनकारीहरू भीडलाई जम्मा हुनबाट रोक्न सकिएन ।
कति पढेका छन् दह्याङ राइले ?
एक्सन हिरो जुनियर एन्टिआरको कति छ सम्पत्ति ?
एजेन्सी । दक्षिण भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता हुन् जुनियर एन्टिआर । उनको जन्म सन् १९८३ मे २० मा भएको थियो । उनका पिता नन्दमुरी हरिकृष्ण एक्टर र राजनीतिज्ञ दुवै हुन् । फिल्म पृष्ठभुमि भएका कारण पनि उन